१२ को परीक्षामा मंसिरको दोस्रो साताबाट हुने ! - नेपाली खोज
शुक्रबार, माघ २, २०७७
जङ्गलको कथामा हसाएर भुतुक्कै बनाउने सिरियल, सक्किगोनीलाई टक्कर दिने क्षमता “हास्नु हुन्न है” मा (भिडियो सहित)
कमलपोखरीमा सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल बनाउन लागिएकामा आपत्ति
यिनै हुन् बुहारीसँग लगातार ४ बर्षसम्म स’म्बन्ध राख्ने ससुरा
४९ मिनेट अगाडि
तराई–मधेशमा जाडो बढ्दा जनजीवन कष्टकर बन्दै
बस र ट्रक एकआपस ठोक्किदामा ११ जनाको मृत्यु
छ बर्षपछि चिहान खनेर हेर्दा जिउदै भेटियो/रातको 12 बजे झाक्रीले देखाए सोच्नै नसकिने चमत्कार/पुरै गाउले मिडियामा (भिडियो सहित)
से, क्स पा वर बढाउने भि यग्रा कस्तो औषधि ? यसको सेवनले हानी गर्छकी गर्दैन ?
किन एकपटक स, म्भो ग गरेपछि घरिघरि गर्न मन लाग्छ ?
१२ को परीक्षामा मंसिरको दोस्रो साताबाट हुने !
बुधबार, कार्तिक ५, २०७७
काठमाडौं – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा छठलगत्तै लिने भएको छ । बोर्डको आइतबार साँझ बसेको बैठकले कार्यविधि पारित गरी परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो । बोर्डले मंसिरको दोस्रो साताबाट परीक्षा लिने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा लिँदा कक्षा ११ को ४० प्रतिशत मूल्याङ्कन, १२ को ४० प्रतिशत र १२ बाट प्रयोगात्मक २० प्रतिशतको आधारमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बोर्डले परीक्षार्थीलाई आफ्नै विद्यालय वा नजिकको विद्यालयमा पुगेर परीक्षा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । गएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधि, प्रक्रिया र पद्धति पु¥याएर सावधानीका साथ परीक्षा लिन नीतिगत स्वीकृत गरेपछि बोर्डले कार्यविधि तयार गरेको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा मन्त्रालयलाई नीतिगत स्वीकृति प्रदान गरेलगत्तै मन्त्रालयले बोर्डलाई परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।’ –शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
सोही आधारमा बोर्डको बैठकले परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । यस वर्षको परीक्षा १ देखि डेढ घण्टाको हुनेछ । बोर्डले ४० प्रतिशत अंकको आधारमा नयाँ प्रश्नपत्र तयार गर्नेछ । प्रश्नपत्र ढुवानी गर्न असम्भव भए इमेलमार्फत पठाउने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले कुनै विषयमा ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक हुने त कतिको २० अंकको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने भएकाले अंकलाई आधार नमानी प्रतिशतको आधारमा परीक्षा लिने निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार दशैंलगत्तै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरागरी छठपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले बोर्डलाई कार्यविधि बनाएर परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएलगत्तै बैठक बसेर परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड र आचार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एक दुई दिनभित्रै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछौं । त्यसपछि परीक्षासम्बन्धी अन्य प्रक्रिया थाल्नेछौं ।’
यस वर्षको परीक्षामा मूल्याङ्कन प्रणाली (ग्रिड)लाई निस्क्रिय पारिएको छ । अर्थात् यो पाठबाट यति अंकको प्रश्न सोध्ने, छोटो र लामो उत्तरको प्रक्रियालगायत सबै व्यवस्था हटाइएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
गोकर्णेश्वरका १६ सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पुस्तक
चितवनका दुई पालिकामा शिक्षक दरबन्दी काटियो
कक्षा ११ : सर्वोच्च पेसी सार्दै, विद्यार्थी र शिक्षक फैसला कुर्दै
शिवालय माविको ६० औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न, ५ जनालाई शिवालय वर्ष सम्मान
हिमाली जिल्ला हुम्लाको दक्षिण क्षेत्रमा हिउँदे बिदामा पनि पठनपानठ शुरु
रुपन्देहीमा कोरोना नतिजा आधा घण्टामै
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन स्थगन
जुनीचाँदेमा छोरी जन्मिए रु १० हजार !
विलियम्सनको दोहोरो शतक, न्यूजील्यान्ड सुदृढ स्थितिमा